i-jetAudio Iletha Ukudlala Komculo Okunamandla futhi Kwenziwe Ngokwezifiso ku-Android | Izindaba zamagajethi
Uma kukhulunywa ngezinye zezidlali zomsindo wedeskithophu ezicebe kakhulu futhi ezisetshenziswa kakhulu, ngokungangabazeki i-jetAudio iphakama phezulu ohlwini. Uma ungumsebenzisi we Android, ungakujabulela ukwazi ukuthi uCowon, inkampani engemuva kwakhe jetAudio, vele udubule i-jetAudio ehlukile ye-android esitolo I-PlayGoogle, futhi kubukeka kungumbono osebenzayo. Kuboshwe isethi ephelele yemisebenzi, nokusekelwa cishe kwawo wonke amafomethi wefayela lomsindo (kufaka phakathi i-MP3, WAV, OGG, FLAC, M4A, MPC, TTA, WV, APE, MOD, SPX, AIFF). I-interface eyinhloko yohlelo ilandela ukwakheka okulula, futhi ikunikeze nenketho yokudlulisa amehlo kumathrekhi omculo ngabaculi, ama-albhamu, izingoma, amafolda nezinhla zokudlalayo. I-interface yesidlali somculo ngaphandle kokungabaza ingenye yezindlela ezinhle kakhulu futhi ezilula ukuzisebenzisa esizibonile kudivayisi ye-Android.
Ngaphezu kwakho konke lokho, i-10-band EQ enama-presets angama-32 ahlukene womsindo nezinketho zokudlala zomculo ezinamandla nge-customizable BBE, BBE VIVA, wide, reverb, automatic gain control (AGC), and X-Bass effect izilungiselelo. ukudlalwa komculo okufiphele nokungashiywanga, ukuhlanganiswa kwemithombo yezokuxhumana (imininingwane engezansi), isivinini sokudlala esishintshashintshayo, isikhathi sokulala esenziwe ngezifiso ukuqala nokumisa ukudlala, nobuhle obuningi obubonakalayo obulula ukwenza jetAudio omunye wabadlali bomculo abahamba phambili be-Android asebefike emakethe kuze kube manje.
Ukucaphuna kusuka ku- jetAudio njengomnqobi kwaba ngesinye sezici zokuqala emjahweni wabadlali bomculo abaphambili Android kungaba okungafanelekile, njengoba njengamanje untula ezinye izindlela ezibalulekile esizobhekana nazo ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa-ke, ngemiphumela yayo enamandla kakhulu yomsindo, ukwakheka okukhangayo nokwenza ngezifiso okubanzi, isidlali siheha abalandeli bomculo we-diehard ukujabulela ukudlala umculo osezingeni eliphakeme kumadivayisi wabo we-Android ngokulawula okufiswa kakhulu kuzilungiselelo zomsindo.
Ukuqhubeka nohlu olude lohlelo lokusebenza lwesici, lunikeza izinsiza ezimbalwa ezilusizo zokulawula i- ukudlala umculo bese uvakashela uhlu lwakho lokudlalwayo oluthandayo kusikrini sasekhaya. Njengabadlali bomculo abasezingeni eliphakeme, i-jetAudio futhi isekela iwijethi yephaneli yezaziso ekuvumela ukuthi udlale / ume isikhashana futhi ushintshe phakathi kwamathrekhi, ngaphandle kokuya kusixhumi esibonakalayo sohlelo lokusebenza. Ngaphandle kwalokho, i-jetAudio ibuye ilethe ezinye izinto ezicashile kodwa ezijabulisayo nezici zokwabelana ngemidiya yokuxhumana nabantu. Isibonelo, uma ugunyaziwe, amathrekhi owalalelayo angashicilelwa ngokuzenzekelayo ku-Twitter naku / noma ku-Facebook. Ikuvumela ukuthi ucacise isenzo sangokwezifiso lapho ushintsha phakathi kwezingoma, zombili ngesandla nangokuzenzekelayo.
Ukushintshwa kwethrekhi mathupha, ungasetha uhlelo lokusebenza ukuthi limise kuqala ithrekhi yamanje bese lishintshela kwelilandelayo, ngenkathi liphela noma liphelisa ithrekhi yamanje ngaphambi kokudlulela kokulandelayo. Ngokufanayo, kukuvumela ukuthi ukhethe isenzo esizenzakalelayo sokushintsha ngokuzenzakalela ithrekhi. Ngalo mqondo, unenketho yokumisa uhlelo lokudlala umculo ngaphandle kokuhlaba ikhefu, fade phakathi kwamathrekhi ngokusho kwesikhawu esichazwe ngumsebenzisi, isikhathi esinqamulelayo, noma ukudlala ithrekhi elandelayo, ngemuva kwekhefu elifushane lemizuzwana embalwa.
Ngemuva kwalokho kunenketho yokucacisa izimo lapho ufuna khona uhlelo lokusebenza ukwenza umsebenzi weshidi lokulandela umkhondo. Isibonelo, ungavula / ucime isici sokuqhubeka kabusha, noma usisebenzise kumathrekhi amade kunemizuzu eyi-10, 15 noma engu-20. Ukulalela komsindo ngaphakathi / ngaphandle komsebenzi, ngenkathi ukuqalisa / ukumisa isikhashana kwamathrekhi nakho kungenziwa kusebenze ngaphakathi kwesikrini esikhulu sohlelo lokusebenza lwezilungiselelo. Phakathi kwezinye izinketho ngaphambili kwezimonyo, ungalungiselela uhlelo lokusebenza ukubonisa ubuciko be-albhamu (ngemifanekiso) ewindini lokudlala. Kukhona futhi inketho yokusetha ubuciko be-albhamu njengesizinda se-albhamu ekhethiwe ngaphakathi kwesikhombimsebenzisi somtapo wohlelo lokusebenza.
Iya kuhlelo lokusebenza lwemisindo yesikrini, futhi ikubingelela ngamasethingi omsindo owenziwe ngezifiso, kufaka phakathi inketho yoku:
Ukusetha okuzenzakalelayo ibhalansi yomsindo ongakwesokunxele / kwesokudla
Setha ileveli ye-preamp ezenzakalelayo (ilungisa ngokuzenzakalela ivolumu yomsindo ngaphambi kokufaka imisindo ethile)
Lungisa okuzenzakalelayo okuzuzayo control (AGC) ukunciphisa ukwehla kwevolumu phakathi kwamathrekhi ahlukene
Nika amandla i-BBE, i-BBE LIVE, isithombe esibanzi se-Stereo, i-Reverb, ne-X-Bass (ngemiphumela yomsindo echazwe ngumsebenzisi, amazinga womthelela, nemodi yokulinganisa ye-reverb)
Setha isivinini sokudlala esizenzakalelayo samanje noma yikuphi phakathi kuka-2,0 x 0,5 xa (ngokulungiswa okuzenzakalelayo kwephimbo)
Yenza kusebenze umsebenzi wokulinganisa, khetha ukusethwa kwesilinganisi sakho osithandayo
Manje, i-crux yohlelo lonke: isikhombimsebenzisi sesidlali somculo. Kusukela ekuqaleni, noma kunjalo, i-jetAudio ibukeka njengesinye isidlali somculo esijwayelekile esinezilawuli eziyisisekelo zokudlala umculo nobuciko be-albhamu, njll. Noma kunjalo, izinkinobho ezahlukahlukene ezikhona ngaphezulu kwewindi lobuciko be-albhamu zingafinyelela zilungele ukuthulisa umsindo, ukweqa esikrinini sezilungiselelo ze-EQ noma ze-SFX ukuze ucacise amasethingi omsindo owathandayo, okuvumela isibali sikhathi sokulala, nokulungisa izinga levolumu kanye nebhalansi yomsindo.
Ukuphatha uhlu lokudlalayo lwe-Now Playing, ungacindezela inkinobho ephezulu ngakwesokudla noma uhudulele phansi noma yikuphi kusixhumi esibonakalayo sesidlali ukwethula uhlu lwadlalwayo. Ukuthepha noma yikuphi enkabeni yewindi lobuciko be-albhamu kuveza iphaneli elihlanganayo elikuvumela ukuthi ulawule isivinini sokudlala komculo. Ukushintsha phakathi kwamathrekhi, ungaswayiphela ngakwesobunxele / kwesokudla ewindini lobuciko be-albhamu. Ngenkathi ulalele ithrekhi yomsindo, ungayisetha njengeringithoni yedivayisi yakho, noma uyingeze ohlwini lwadlalwayo oluthandayo.
Njengoba kushiwo ekhasini lesicelo le-Google Store Play, ngejetAudio Basic (inguqulo yamahhala), kuzofanele ubekezelele izikhangiso, ngenkathi ngasikhathi sinye, kufanele wenze ngaphandle kwemiphumela yomsindo yencazelo ephezulu ye-BBE / BBE ViVA. Abasebenzisi bazokwazi ukuphakamisa yonke imikhawulo ngenguqulo ye-jetAudio Plus, noma nini lapho itholakala. Sekukonke, kwa-jetAudio, i-Android ngokuqinisekile ithole isidlali somculo esinamandla amakhulu futhi esigcwele kakhulu esinikela ngezici eziningi mahhala.
I-jetAudio Basic idinga i-Android v2.3.3 noma ngaphezulu ukuze isebenze, futhi ingalandwa ngesixhumanisi esingezansi.
Landa i-JetAudio Basic
Imininingwane engaphezulu - (Tune Mood Your: umculo amathrekhi azo zonke izikhathi nemizwa [WP7])
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » I-jetAudio iletha ukudlala komculo okunamandla nokwenziwe ngokwezifiso ku-Android
Ukuqondisa kabusha Ithebhu entsha, khetha ikhasi lethebhu entsha